Scholarship Kubva kuSAT Scores 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo: Yazvino Chikoro Nhau
Scholarships zvichibva paSAT Score: Semudzidzi ari kutsvaga kudzidza, ndapota teerera kumusoro. Iko kune masomo iwe aunogona kuwana zvichibva pane yako SAT mamaki. Mukuronga mazwi, aya masifundi anoda kuti iwe uve neimwe SAT mamaki.
Nekudaro, pane dikanwo yekuchengeta izvo SAT zvibodzwa uye zvakanakisa. Kana iwe uchida kunzwa zvakawanda, saka verenga mberi.
Muchikamu chino iwe uchaverenga nezve zvimwe SAT zvikoro uye kudzidza kwakabatana navo. Nekudaro, zvakakosha kuti uzive zvinoreva SAT mamaki. Izvi zvinobatsira uchitarisa mamwe dzidzo zvakabatana nazvo.
Zvinoreva zveSAT Score
Kuti unzwisise chii a SAT mamaki ndiko, pane chikonzero chekuziva kuti chii chinonzi SAT. Saka nekudaro, cherekedza kuti, SAT muyedzo wakaenzana unoshandiswa zvakanyanya kukoreji yekubvumidzwa muUS Kunyangwe pakutanga yainzi Scholastic Aptitude Test, yakazonzi Scholastic Assessment Test.
Gare gare, yakanzi iyo SAT I: Kukurukurirana Bvunzo. Zvakare, iyo SAT Reasoning Test, ipapo ingori iyo SAT. Nekudaro, sezvo yaive yakamisikidzwa ne koreji Bhodhi muna 1926, zita rayo uye zvibodzwa zvakachinja kanoverengeka.
Zvakare, cherekedza kuti SAT mamaki ndicho chikamu chakabatana nemuyedzo uyu. Mune mamwe mazwi, iyo mamakisi anayo mune iyi bvunzo. Ziva zvakare kuti SAT mamaki renji ndeye 400-1600. Uye izvi ndezvese zvako mamaki uye mazana masere kusvika mazana mazana masere ezviuru zveimwe yega yezvikamu zviviri chikamu.
Yakanakisa Scholarship nedzimwe SAT Chikamu che2021 / 2022
1. SAT Zvikoro kubva mazana mana kusvika chiuru
Mauto ROTC Makore mana-Makore Epamusoro Chikoro Scholarship
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyi kudzidza ndeye chikoro chepamusoro vadzidzi. Zvakare, ndezvevaya vari kuronga kuenda kumakore mana chirongwa chekoreji.
Kuti uzive zvakawanda nezve izvi kudzidza, cherekedza. Iwe unobata wako wepachikoro chepamusoro wezano wezvedzidzo kana kambasi Dhipatimendi reSainzi reMasoja. Zvakare, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanyira application link pazasi.
Award Amount: Shanyira application link pazasi.
Chidimbu: Munyoreri anofanira kunge ari pakati pemazera e17 ne26. Zvakare, anofanira kunge aine hushoma 2.5 GPA. Pamusoro pezvo, unofanirwa kunge uine diploma rechikoro chepamusoro kana zvakaenzana. Uye inofanirwa kukora yakaderera 1000 paSAT / 19 pane iyo ACT uye inosangana nemitezo yemuviri.
Mipiro Inowanikwa: Shanyira application link pazasi.
Ichi ndicho chimwe cheScholarships chakavakirwa paSAT Score. Uye iyihunyanzvi inokurudzira kusiyana. Zvakare, iri mukati mebasa. Uye, zviri kuburikidza negore purogiramu yechikoro. Uyezve, ndezveVatema / vemuAmerican American, Hispanic, Native North America uye Pacific Islander vadzidzi.
Zvisinei, cherekedza. Mubhizimisi anofanira kunge ane mubereki mumwechete wekuzvarwa uyo ari nhengo yeimwe yemapoka mashoma anotevera:
Mutema / African American.
Zvakare, Native North America.
Pamusoro pezvo, Pacific Islander.
Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanyira application link pazasi.
Award Amount: $ 4,000.
Chidimbu: Munyoreri anofanira kunge aine chinangwa chekutsvaga basa muactuarial basa. Zvakare, inofanirwa kuve izere-wenguva yakazara undergraduate mudzidzi pachikoro cheUS chakabvumidzwa. Uye inofanirwa kuve neiyo shoma GPA ye3.0 (pachiyero che4.0). Zvakare, inofanirwa kuve neiyo shoma ACT math math mamaki e28 kana SAT math mamaki e600.
Deadline: May 02, 2021.
2. SAT Zvikoro kubva mazana mana kusvika chiuru
CITe Inouya Mudzidzi Kudzidza Scholarship
Iyo CITe Inouya Yevadzidzi Mudzidzi Scholarship Scholarship yakavambwa kutora vadzidzi vakatanhamara kune iyo koreji's Information Systems chirongwa. Zvakare, iyo ndeimwe yeScholarship yakatarwa neSAT Score.
Uyezve, ndokumbira utarise. Vagashiri veiyo kudzidza vachasarudzwa neCITe Scholarship Committee. Uye ichave iri pahwaro hwehunhu hwedzidzo.
Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanya kunongedzera kwekushandisa pazasi.
Award Amount: $ 2,000.
Chidimbu: Munyoreri anofanira kunge ari mutsva anouya. Zvakare, inofanirwa kuve nechikoro chepamusoro GPA cheinenge 3.0. Uye iyo ACT mamakisi angangoita 22 kana SAT mamaki angangoita 1010. Zvakare, inofanira kunge iri Information Systems makuru.
Mipiro Inowanikwa: Shanyira chinongedzo chekushandisa pazasi.
Boise State WUE Mubairo
Zvakare, ichi chimwe cheScholarship chakavakirwa paSAT Score. Asi, kuti utariswe nezve WUE Mubairo, cherekedza. Iwe unofanirwa kuve mugari weUS kana mugari wechigarire.
Pamusoro pezvo, unofanirwa kunge uine pekugara zvachose mune imwe yenyika dzinotora chikamu / nzvimbo dzeUS:
Pamusoro pezvo, California, kana Colorado.
Montana, Nevada, kana New Mexico.
Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kuve uine 3.2 GPA kubva kusekondari. Uye inofanirwa kuchengetedza 2.5 yekuvandudza. Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanya kunongedzera kwekushandisa pazasi.
Award Amount: $ 51,544.
Chidimbu: Munyoreri anofanira kunge ari mugari weUS kana mugari wechigarire. Pamusoro pezvo, inofanirwa kunge iine 3.2 GPA kubva kuchikoro chesekondari, uye chengetedza 2.5 yekuvandudza.
3. SAT Zvikoro kubva mazana mana kusvika chiuru
Zvekare, iyi ndeimwe yeiyo Scholarship yakavakirwa paSAT Score. Zvakare, cherekedza kuti iyo Engebretson Foundation Scholarship inopihwa kune mumwe mudzidzi gore rega.
Nekudaro, mudzidzi anofanira kunge ari mukuru wechikoro chepamusoro. Uye haifanirwe kuratidza kwete chete kudiwa kwemari asiwo inonakidza mashandiro edzidzo uye kugona kwehutungamiriri.
Pamusoro pezvo, cherekedza ndapota. Mubairo wepagore unohwina unogashira madhora zviuru zvishanu pamesita yekoreji Zvakare, vanokunda vanogona kunyorera zvekare mubairo gore rega. Asi iye anonyorera anofanira kunge aine CHITSA che5,000 kana SAT ye28. Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanyira application link pazasi.
Award Amount: $ 10,000.
Chidimbu: Munyoreri anofanira kunge ari mukuru wechikoro chepamusoro. Uye vanofanirwa avo vanoratidzira kwete kwete chete zvemari zvinodiwa asiwo inonakidza mashandiro ekuita uye hutungamiriri kugona. Pamusoro pezvo, inofanirwa kuve neCIT ye28 kana iyo SAT ye1240. Zvakare, inofanirwa kunge iine 3.75 GPA kana pamusoro uye / kana pamusoro 5% yekirasi inopedza kudzidza.
4. SAT Zvikoro kubva mazana mana kusvika chiuru
Colorado Christian University Inokudza Scholarship
Izvo zvakakosha iwe kuti uone kuti CCU inopa mibairo kune vatsva vatsva. Zvisinei, ndezvevaya vanosangana nezvinodiwa zvedzidzo. Uye zvakavimbiswa kwemaminetsi masere.
Izvi chero bedzi mudzidzi achichengetedza inogutsa kufambira mberi mune zvedzidzo (SAP). Zvakare, uye iri kuenderera ichinyoresa kuCCU's Koreji yeAppgraduate Zvidzidzo.
Zvakare, ichi chimwe cheScholarship neSAT Score. Nekudaro, kuti uwane rumwe ruzivo kana kunyorera, ndapota shanyira application link pazasi.
Award Amount: $ 7,000.
Chidimbu: Mubhizimisi anofanira kunge ane zvishoma zvishoma 3.0 GPA. Zvakare, inofanirwa kuve neiyo yepasi ACT Chikamu chinoumbwa che 21 kana SAT II mamaki e1450. Uyezve, inofanirwa kuchengeta inowedzera 3.0 GPA kuCCU. Uye sangana nezvose zvinodiwa pakubatsira vadzidzi
Kubva pamusoro, cherekedza. Mukana wako wekuwana iwo ari pamusoro kudzidza kunoenderana neyako SAT mamaki. Nekudaro, uine yakanaka uye yakakwira SAT mamaki, iwe unomira mukana wekutarisirwa kune iwo ari pamusoro masomo.
Nekudaro, ita shuwa kuti unosangana nezvinodiwa usati waisa chikumbiro. Zvakare, iwe unogona kugovana ichi chinyorwa. Nekudaro, inzwa wakasununguka kugovera ichi chinyorwa. iwe unogona kugovana kushamwari uye nhengo dzemhuri. Rombo rakanaka.
LASCOHET Fomu Yekugamuchira ye2020 / 2021 Yedzidzo Session
Nigerian Navy Recruitment Chikumbiro 2021/2022 Tarisa Jobho Maitiro
Kuongororwa kweZvinhu Zvinotungamira kune Yakaderera kugadzirwa Kwevashandi veNigerian
RMIT Scholarship yeVadzidzi 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo
UNICAL Tumira UTME Mibvunzo Yakapfuura 2021 & Mhinduro PDF Download
Vakapedza Kudzidza Executive Assistant Recruitment kuDangote Group
10 Misiyano Pakati Peviri Cheeseburger Uye Mcdouble
« Nyorera Izvozvi kune World Bank Nyowani Kubatira muNigeria 2021
Economics Major Tsananguro: Chii Chingaitwe neEconomics Degree Iwe? »